काठमाडौं, १७ असार । निर्वाचन आयोगले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि लामिछाने नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ताका लागि निवेदन ...
nepalpage.com . १ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं, १७ असार । नेपाली फोटो पत्रकारहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे) ले भारतीय फोटोग्राफर दुर्लभ रोय चौधरीलाई छुटाउन आर्थिक संकलन गर्ने भएको छ । खोटा मुद्रा बोकेको अभियोग...
काठमाडौं, १७ असार । दिवाकर घले गुरुङ नेपाली यु–२० राष्ट्रिय टिमको टिम व्यवस्थापकमा नियुक्त भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले शुक्रबार महावीर क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङलाई यु-२० टिमको व...
दोलखाको विविधता झल्काउने फोटो मेला काठमाडौंमा
कालिका खड्का काठमाडौँ । दोलखा जिल्लाको विविधता झल्काउने खालका तस्बिरहरुको मेला ‘फोटो मेला–२०७९’ काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गस्थित पर्यटन बोर्डमा सुरु भएको छ । प्रदर्शनीमा दोलखाको धार्मिक, सांस्कृतिक ...
nepalpage.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैनः आयोग
काठमाडौं, १७ असार । निर्वाचन आयोगले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भई नसकेको जनाएको छ । केही दिनअघि लामिछाने नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ताका ल...
जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशकमाथि विप्लवका विद्यार्थीले दले कालोमोसो￼
काठमाडौं । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशिक अनिल कुमार झालाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाका विद्यार्थी संगठनले कालोमोसो दलेको छ । पाठ्यपुस्तकको कृतिम अभाव गराएको तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोप ...
nepalpage.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय सभाले बजेट आश्रित तीनवटा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ र ऋण ...
जानेलाई शुभकामना दिनु र आउनेलाई स्वागत गर्नु नै राजनीतिः उपेन्द्र यादव
काठमाडौं, १७ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानेलाई शुभकामना दिनु र आउनेलाई स्वागत गर्नु नै राजनीति रहेको बताए। यादवका अनुसार पार्टी विभाजनलाई आफ्नो वशभन्दा बाहिरको परि...
नबिल बैंकका नवनियुक्त सीईओ ढुंगानाले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौँ, १७ असार । ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नबिल बैंकले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को कार्यभार सम्हालेका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ढुंगानालाई सीईओमा नियुत्त गरेको थियो ...
nepalpage.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अभिनेता राजेश हमालबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार बिहान भएको भेटमा दाहाल र हमालबीच राष्ट्रिय राजनीतिबारे कुरा भएको संगीतकार चेतन...
nepalpage.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ, १७ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारीका अनुसार सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्...
nepalpage.com . ८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ओली र प्रचण्डपछि बामदेवले भेटे माधव नेपाल
काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टी एकता मुख्य उद्देश्य राखेर पार्टी खोलेका बामदेव गौतमले कम्युनिष्ट शीर्ष नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तिव्रता दिएका छन् । गौतमले बिहीबार साँझ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष म...
डुम्रिबोटे (उदयपुर), १७ असार । अविरलको वर्षासँगै आएको बाढीले सप्तकोसी नदीको बहाव गाउँतिर सोझिँदा बेलका नगरपालिका र बराह क्षेत्र नगरपालिका तीन वडाका दर्जन बढी गाउँका बासिन्दा रातभर ढुक्कले निदाउन पा...
काठमाडौँ । गत वर्षको क्रुज लागुऔषध मामिलामा नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो(एनसीबी)बाट क्लिन चिट पाएका बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यनले बिहीबार एक विशेष एनडीपीएस अदालतसमक्ष आफ्नो पासपोर्ट फिर्ता ...
भारतमा आजदेखि एकल प्रयोग हुने प्लाष्टिक उत्पादन र विक्री वितरणमा रोक
नयाँ दिल्ली । भारतमा एकल प्रयोग हुने प्लाष्टिकका सामान उत्पादन र विक्री वितरणमा आजदेखि रोक लगाएको छ । एकल प्रयोगका प्लाष्टिकका बस्तुमा जुलाई १ तारिकदेखि १९ प्रतिबन्ध लगाइएको हो। प्लास्टिक फोहोर व...
nepalpage.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ महानगरका सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अबदेखि सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरेको छ । शुक्रबार महानगरले एक सूचना जारी गर्दै महानगरको सडक, सार्वजनिक स्थल, गल्ली, पार्क, सरकारी कार्यालयको वरिपरि, ...
अन्धविश्वासको परकाष्ठ : नवजात शिशुसहित गोठमा सुत्केरीकाे बास
मुगु । जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका–५ की २६ वर्षीय मनसुबा शाही सुत्केरी भएपछि गाईगोरु बाँध्ने गोठमा नवजात शिशुसहित बस्दै आएकी छन् । शाही सुत्केरी भएपछि ९ दिनसम्म गाई राख्ने गोठमा बस्न बाध्य भएकी...
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले असार २७ गते बस्नेगरी बैठक बोलाइएको बताए । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय समि...
वीरगञ्ज । पर्सामा बालिकाको शवसहित तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बहुदरमाई नगरपालिका–७ ढोङ्गी खोलाको मसानघाटमा एक बालिकाको शव जलाउँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ...
nepalpage.com . १० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रदेश १ सांसद् गुलेफुन खातुनको राजीनामा स्वीकृत
विराटनगर । सरकारी सहीछाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी नेकपा (एमाले) प्रदेश १ सांसद् गुलेफुन खातुनले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्ड...
nepalpage.com . १२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सप्तरी । सप्तरी प्रहरीले कुटपिट मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रुपनी गाउँपालिका–५ बसविट्टी ४८ वर्षीय सिताराम चौधरी रहेका छन् । उनलाई प्रहरीले १४ वर्षपछि पक्राउ गरेको हो । ...
nepalpage.com . १३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
केपी ओलीद्वारा समवेदना व्यक्त
काठमाडौँ । पत्नी वियोगमा रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेँलाई भेटेर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समवेदना व्यक्त गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली पत्नी राधिका, पा...
nepalpage.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कर्णाली । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनुका साटो विदेशी वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन दिँदा परनिर्भरता बढेको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आज पार्टीको प...
nepalpage.com . २१ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानले असंलग्नतालाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा समेटेको उल्लेख गर्दै ‘असंलग्न आन्दोलन’ का सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएक...
बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ३८ जना घाइते
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–११ अपांग बाल अस्पतालको कर्मचारी चढेको बस दुर्घटना हुँदा एकको जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना घाइते भएका छन् । कार्यालयबाट घरतर्फ फर्केने क्रममा बा१क ५७४७ नम...
शेखर कोइराला पक्षको बैठक भोलि पुनस् बस्ने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षको बैठक भोलि पुनः बस्ने भएको छ । बिहीबार राजधानीको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा बसेको कोइरा समूहको बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स...
काठमाडाै, १६ असार । मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले ताला लगाएका छन् । बिहीवार किसानहरुले विभिन्न पाँच बुँदाको माग गर्दै मन्त्रालयको लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशा...
nepalpage.com . २३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
राज्य उद्योगी तथा व्यवसायीहरुकाे संरक्षण नगरी मुखदर्शक बनेकाे एमाले आराेप
काठमाडौं, १६ असार । नेकपा एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले राज्यले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई संरक्षण नगरेर मुखदर्शक बनेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेको उ...
काठमाडौं, १६ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता ...
भक्तपुर, १६ असार । आज नेपालकै अग्लो मन्दिर प्यागोडा शैलीको भक्तपुर टौमढी क्षेत्रस्थित ङातापोल (पाँचतले) मन्दिरको ३२०औं जन्मोत्सव मनाईएकाे छ । मन्दिर निर्माण गरेको तीनसय बिस वर्ष पूरा भएको अवसरमा ब...
काठमाडौं, १६ असार । फिलिपिन्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोङबोङ मार्कोस‍्को सपथग्रहण समारोहमा नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरी सहभागी भएका छन् । बिहीबार राजधानी मनिलामा आयोजित समारोहमा कांग्रेस के...
भारतीय राजदूतले राष्ट्रपतिलाई बुझाए ओहदाको प्रमाणपत्र
काठमाडौं, १६ असार । नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् । उनले आज राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ...
nepalpage.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं, १६ असार । साताको पाँचौँ कारोबार बिहीबार सेयर बजारमा छलाङ आएको छ । केही महिनायतादेखि निरन्तर घटेको सेयर बजार यो साता भने केही सुधार आएको छ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक ७४।९३ अकं...
प्रतिगामी तथा अधिनायकवादीलाई परास्त गर्न निर्वाचन पार्टीले जित्नु अपरिहार्यः कांग्रेस
काठमाडौँ, १६ असार । नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले प्रतिगामी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति र संस्कृतिलाई परास्त गर्न आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले जित्नु अपरिहार्य र...
काठमाडौं, १६ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवालाई कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण भएपछि आरजु केही दिनयता होम क्वारेन्टाइनमा बसेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको सर...
विद्युतिय मतदान गराउने तयारी, साउन मसान्तसम्म मेसिनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह
काठमाडौं, १६ असार । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विद्युतिय मतदान यन्त्र (इभीएम) प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तसम्म व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले गृह मन्त्...
सार्वजनिक कार्यक्रममै खनाल र नेम्वाङको ‘भनाभन’
काठमाडौं, १६ असार । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङबीच सवालजवाफ भएको छ ।सिंहदरबारमा बिहीबार ६४औँ संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दुई शीर्ष नेता...
काठमाडौं, १६ असार । भक्तपुर, स्याङ्जा, कञ्चनपुर प्युठानमा वर्षाको कारण घर र पर्खाल भत्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चितापोल लाकुलीस्थित कान्छा श्रेष्ठको घर आग...